ဆင်တဲကဖေး July 5, 2010 at 4:26 PM
မောင်ဘကြိုင် July 5, 2010 at 4:51 PM
nannlaypyaenu July 5, 2010 at 7:21 PM
မစီးရဲဘူး.. ကားထဲကအထွက် စကပ်နဲ့ ငြိနေ ဒုတ်ခွ :P
minkha thawtar December 18, 2011 at 10:11 AM
စီးချင်လိုက်တာဗျာ ဒါပေမဲ့ အဲဒိလောက်ကြီးတာ ကျွန်တော့် ကိုယ်လုံးနဲ့ ဘယ်ဆံ့မလဲ အိမ်း....
minkha thawtar December 18, 2011 at 10:15 AM
အင်း ဒီကားကြီးကို ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ အကြီးအကျယ်ဆုံး မင်္ဂလာပွဲ ဖြစ်တဲ့ ပြေတီဦး မင်္ဂလာပွဲ မှာ စပွန်ဆာပေးရင် ကောင်းမှာပဲ.... အဲဒါမှ ကားကြီးက မှန်အများကြီးဆိုတော့ ပြေတီဦး သူ့မိန်းမ ကို ရှုထောင့်အမျိုးမျိုးကနေ ကြည့်လို့ရမှာ... အိန်း ကောင်းလေစွ... ကောင်းလေစွ.......
i've seen similar one at NASA in Houston. it's was full with crabs and like fishs stuffs. anyway it'sareally cool one. ty.